दुवै अध्यक्ष देशबाहिर भएका बेला माधव नेपालले बोलाए स्थायी समिति बैठक, किन गरे सरकारको विरोध ?
Sun, Feb 23, 2020 at 11:14am
संसदमै सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका नेपालले दुवै अध्यक्ष विदेशमा रहेको बेला बैठक बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिदै
शुक्रबार, १२ असोज २०७५,	आहाखबर	1.64K
सत्तारूढ नेकपामा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालपछि तेस्रो वरीयताका नेता हुन्, माधव नेपाल । नेकपाका दुवै शक्तिशाली अध्यक्ष देशबाहिर भएका बेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् ।
शुक्रबार दिउसो ३ बजे नयाँ बानेश्वरको एक होटलमा बस्ने गरी नेता नेपालले स्थायी समिति सदस्यलाई बोलाएका हुन् । भेलामा सरकारको काम कारबाही र पार्टी एकताका विषयमा छलफल हुने उनको सचिवालयले जानकारी दियो ।
बिहीबार मात्रै संसदमै सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका नेपालले दुवै अध्यक्ष विदेशमा रहेको बेला बैठक बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
उनी निकट एक नेताका अनुसार भेलाबारे दुवै अध्यक्षलाई जानकारी गराइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड श्रीमती सीता दाहालको उपचारका लागि बैंककमा छन् ।
ओलीले राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै आफू तीन चौथाई बहुमतसहतिको प्रधानमन्त्री भएको बताइ रहँदा सरकारको कार्यशैलीको संसदबाटै आलोचना गरेर नेता नेपालले स्थायी समितिको बैठक राख्नुलाई नेकपाभित्र सरकारको कार्यशैलीप्रति फैलिएको विस्तृणको उत्कर्ष रुप उजागर गरेको छ ।
नेकपामा ४५ जना स्थायी समिति सदस्य छन् ।
किन गरे सरकारको विरोध ?
नेपालले शुक्रबार अपरान्ह बानेश्वरमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । आफूसँग भएको सहमति विपरीत अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकबाट एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै नेपालले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने अडान राखेका छन् ।
नेपाल अफ्रिका भ्रमणमा रहेका बेला ७ प्रदेशका २८ जना इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरु चयन भएका थिए । सो निर्णय परिपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा समेत पठाइसकिएको छ ।
नेता नेपालले भने सो निर्णय पार्टीको विधान विपरीत भएको भन्दै अनौपचारिक छलफलका लागि स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई बोलाएका हुन् । आफू तथा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई झुक्याएर निर्णय गरिएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई उनले यसबारे औपचारिक जानकारी दिन लागेको स्रोतले बतायो ।